Isiqinisekiso sethu - I-MOLONG TATTOO SUPPLY CO., LTD
Ukunakwa Kobungcweti, Ukunakekelwa Kwezobuchwepheshe
Ukulawulwa Kwekhwalithi ye-MOLONG Kusuka ekuhlolweni kuye ekulethweni
Wake wazibuza ukuthi yini imikhiqizo yakho esanda kuthengwa ye-tattoo evela eChina? Kwa-MOLONG, ngisho nangaphambi kokuba kufakwe i-oda lakho noma ngabe ungumthengisi wempahla, okusabalalisayo, noma othile ofuna ukuthenga igajethi yakamuva - imikhiqizo yethu ihlehliselwa ohlelweni oluhlola futhi luhlole ikhwalithi kabili, kusukela ekutholeni kuya ekulethweni.
Ukuhlwaya imikhiqizo yakho
Icubungula i-oda lakho lomkhiqizo
Ukuhlola imikhiqizo yakho
Ukupakisha imikhiqizo yakho
Ukulandelela imikhiqizo yakho
Ngemuva kokuthola inkokhelo yakho (Akunandaba Idiphozithi noma Inkokhelo ephelele), abangani bakho eMOLONG entwasahlobo basebenze ngokushesha baqale ukucubungula i-oda lakho.
Abasebenzi bethu babuyekeza imininingwane ye-oda lakho futhi bacubungula ama-oda wakho. Ukuthengisa kwakho kokuxhumana kuzogcina ukulandelela ama-oda akho.
Noma abahlinzeki bethu bengabakhiqizi abathembekile bezinto ezisezingeni eliphakeme, asithathi amathuba nge-oda lakho elithile.
Yonke imikhiqizo ihamba ngenqubo ephelele ye-QC:
Konke kuqala kudluliselwe esikhungweni sethu sokusabalalisa samazwe omhlaba lapho ithimba lokuhlola eliqeqeshwe kakhulu lihlola imikhiqizo yakho ngokususelwa kuzivumelwano eziqinile nezidingo zokuhlola. Futhi izidingo zethu ziphakeme: amaphesenti angama-80 kuphela emikhiqizo ekhethiwe ekuqaleni anikezwa isitembu sethu semvume kulesi sigaba Ngabe silitholile i-oda lakho kahle? Ngaphambi kokuthi siqale ukupakisha, sihlola ngokuphelele ukufanisa ama-oda kahle.
Ithimba lethu lokulawula ikhwalithi bese linikeza umkhiqizo wakho okunye ukuhlolwa, ngaphakathi nangaphandle, kulandela izivumelwano eziqinile nezimfuneko.
Uma umkhiqizo uhlangabezana nezindinganiso zethu, siwunika isitembu sethu sokuvunywa. Manje isilungele ukuthunyelwa kuwe!
Uhlaka lwezinqubomgomo zethu ze-QC
Ithimba lokupakisha nokulethwa kwe-MOLONG ligijima njengewashi lewashi, noma ngabe nathi sisho njalo. Izinto zihlala zihlolisiswa ngokucophelela nganoma yikuphi ukukhubazeka kokuklama nokuklama ngaphambi kokuba zithunyelwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi into oyithandile nge-inthanethi yinto oyithola ku-courier yethu. Amalungu eqembu lethu ahlola ama-slips ngesiqinisekiso sokuqala sokuthenga online, bese abukeze umkhiqizo odonswe eshalofini ukuze aqiniseke ukuthi uyahlola nomkhiqizo osohlwini.
Lapho-ke, kuphela lapho, iqembu liqhubekela phambili ekupakisheni i-oda, liphindwe kabili (futhi kaningi ngaphezulu) ekugoqeni i-bubble naku-tape.
Okulandelayo, kuphuma ngomnyango ezandleni eziphephile ngezithunywa zethu ezithembekile neziqinisekisiwe.
Lapho umkhiqizo wakho ushiya iminyango yethu, siqhubeka nokuwulandela uze ufike kowakho. Iqembu le-MOLONG lenkonzo yamakhasimende lihlala lisebenza ngasese ukubhekana nezidingo zakho zonke nombuzo wakho. Silandelela ukuthunyelwa kwakho ngesikhathi sangempela, futhi kuyatholakala lapho uthola khona ithuba lokuphendula noma imiphi imibuzo, kungaba nge-imeyili, ngengxoxo ebukhoma, noma ngocingo. Akunankinga, sihlala silapha ukukusebenzela.
Abahloli baseMOLONG Emsebenzini
Ithimba lethu lochwepheshe lisebenza ngokungapheli ubusuku nemini ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yakho ifinyelela emazingeni owafunayo futhi uwafanele.